तुलसीलाई किताब व्यापारले दिएको सफलता
03:38 आईतवार १८ , जेष्ठ २०७७ NepalBit 1475
प्रदेश नम्वर एकको सुन्दर शहर धनकुटा आफ्नो काखमा शान्त, सौम्य र शितल तमोरको स्वच्छता सिन्चन गरेर उभिएको पहाडी थुम्को हो । ऐतिहासिक रुपमै धनकुटाले पुर्वको आर्थिक, सामाजिक , शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्र लाई समेत आफ्नो कर्तव्यका रुपमा राखेको छ । यो पुर्वका भोजपुर , संखुवासभा , तेह्रथुम संग प्रत्यक्ष रुपमा व्यापारिक सम्वन्ध राख्ने क्षेत्रका रुपमा परिचित छ नै । यही ठाउँमा न धेरै होचो , न धेरै अग्लो चौडा छाति , हसिँलो अनुहार भएका एक व्यक्ति छन् तुलसी बाराकोटी ।
वि.सं. २०३० सालमा तेह्रथुम जिल्लामा बुवा खड्ग प्रसाद बाराकोटी र आमा लक्षिमा बाराकोटीका माहिला सन्तानका रुपमा जन्मिए । उनको बाल्यकाल आफ्ना छ जना दाजुभाइ संग खेल्दै जिस्कंदै वित्यो । औपचारिक शिक्षाका रुपमा आइए गरेका उनले वि.सं. २०५२ सालमा खानेपानी संस्थानमा जागिरे जीवनमा प्रवेश गरे । त्यसवेला उनको मासिक तलव सात सय मात्र थियो । यो समय उनले आफ्नो वैवाहिक जीवनको सुरुवात कमला चौंलागार्इं संग गरिसकेका थिए । जागिरे जीवनले आफ्ना चाहना त सवै पुरा गर्न गाह्रो थियो श्रीमती अनि दुई छोरी प्रज्ञा र विज्ञाका चाहनाहरु त सपनै सपनाको चाङ जस्तो लाग्थ्यो । बाराकोटी त्यो समय संझन्छन् अनि टोलाउँछन् । तर आजको दिन त्योे अवस्था छैन ताकि चाहना पुरा गर्नकै लागि सिमित तलवको आसामा बस्नु परोस् । उनले वि.सं.२०५३ सालमा खानेपानी संस्थानको जागिर राजिनामा दिए र आठराई पुस्तक पसल धनकुटामा स्थापना गरे । त्यसवेला उनको लगानी मात्रै पचहत्तर हजार थियो ।
उनी आफ्नो व्यवसायिक जीवनको सफलताको पछाडी गर्वका साथ भन्छन् “ यो मेरो मात्र एक्लो प्रयास होईन । कमला विहानै उठ्छिन् । पुजा गर्छिन् र मेरो निधारमा टपक्क टीका लगाईदिन्छिन् । अनि प्रार्थना गर्छिन् , व्यवसायिक सफलताका लागि । उनी व्यवसायका लागि अहोरात्र काम गर्छिन् । छोरीहरु केटाकेटी हुँदा पनि उनले पसलको कामलाई आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छाईनन् । यसको सफलता नै आजको उपलव्धि हो ।” अहिले आठराई पव्लिकेसनको भोजपुर संखुवासभा तेह्रथुम हेर्ने डिलर उनैले सन्चालन गरेका छन् । उनको पसलमा एउटा वेरोजगार युवाले आफ्नो भविस्य बोकेर वसिरहेको समान्यज्ञान देख्छन् । उनी लोकसेवाका कितावहरु विक्रि गर्छन् । एउटी आमा डोकाभरी सुन्तला वेचेर फर्किएपछि नानीहरुलाई ठूलो मान्छे धनकुटा क्षेत्रिय कार्यालयका हाकिम बनाउने सपना किन्न सक्छन् । दिनभर किताव कपि र पेन्सिल बेचिरहेका भेटिन्छन् बाराकोटी दम्पति ।
अचेल बाराकोटी किताव मात्रै वेच्दैनन् । विहानको नित्यकर्म पछि उनी नजिकैको योगा केन्द्रमा योगा गुरु बन्न पुग्छन् । कुनै समय जागिरमा गएका उनी जागिरेहरुकै गुरु बनेको कुरा गर्वका साथ भन्छन् “ म संग योगा सिक्न अधिकृतहरु आउनुहुन्छ । सरकारी कर्मचारी , बुढा बा आमा , समवयी सवैसंग बसेर योगा गरिरहँदा आनन्द लाग्छ । जीवनमा खुसि भनेकै यही त रहेछ । कुनै दिन जागिरे जीवनमा तलवले सुरुवुरु जीन्दगी चलाएको आज उनै जागिरेहरुसंग कुम जोडेर हिँड्न पाएको छु । अहिले त म पनि आर्थिक , सामाजिक हिसावले सक्षम रहेंछु भन्ने लाग्छ ।”
तर यतिवेला बाराकोटीलाई आफ्नो व्यवसायिक जीवनको सफलता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ धनकुटामा तुलनात्मक रुपमा व्यवसाय बढ्न नसक्ने अवस्था दिनानुदिन बढेको महसुस हुन्छ । यसको कारण हो पहिले संखुवासभा , भोजपुर , तेह्रथुमका विद्यार्थीको अध्ययनको मुख्य केन्द्र धनकुटा थियो । यी जिल्लाबाट धनकुटा बसाईं सरेर आउनेहरु धेरै थिए । आजको दिनमा धनकुटाले बसाईं सरेर आउनेहरुलाई धनकुटामा राख्न सकेन । यहाँको शैक्षिक स्तरका तुलनामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ काठमाण्डौ र तराईका जिल्लाहरु भए । हिजोका दिनमा सयौं विद्यार्थीहरु भएका कलेजले थोरै विद्यार्थी पढाईरहेका छन् । उनी भन्छन् “ अर्को कारण हो बैदेशिक रोजगारी । पढ्ने उमेर भएका युवाहरु प्राय विदेशमा छन् । यसले जीवनस्तर त बढायो तर पुस्तकको पाठक घटायो । ” बाराकोटी लाई यो पनि लाग्छ हामीले आफ्नो मुल्यवान समय सामाजिक सन्जाललाई दिइरहेका छौँ । प्रविधिको गलत प्रयोगका कारण हाम्रो पठन संस्कृतिमा गिरावट आएको छ । उनको चाहना छ नेपाल सरकार , धनकुटा नगरपालिका , स्थानीय नागरिक स्वयंको प्रयास भएमा यो गिरावट र पुस्तक प्रतिको लगाव बढ्ने थियो अवस्य नै ।
एक सफल पुस्तक व्यवसायी भएका नाताले मात्र नभई उनले आफ्नो अन्तरहृदय बाटै भनिरहेका छन्, यदी समाजलाई चिन्तनशील र चेतनशील बनाउने हो भने पहिले समाजमा किताव पढाउनु पर्छ । चाहे पाठक औपचारिक शिक्षा लिंदै गरेको होस् वा त साक्षर मात्रै किन नहोस् । बिषेश गरी औपचारिक शिक्षा पद्धतीका पुस्तकहरु बेचिरहेका उनी भन्छन् “ यो हाम्रो निरन्तर आय दिने व्यापार हो । आख्यानको बजारलाई फिल्मले प्रतिस्थापन गरेको छ । कविता संग्रहका लागि युटुवमा धेरै कविताहरु भ्ेटिन्छन् । निबन्ध मान्छेले विरलै पढ्छन् । तथापि यो आग्रह छ कि एकपटक प्रत्येक नागरिकले फर्किएर पुस्तक संग सहकार्य गर्नु आवस्यक छ ।”
अन्त्यमा बाराकोटी भन्छन् “म कुनै समय नोकरी गर्थेँ । नोकरी केही सिप चलेन भने गर्ने चिज रहेछ । यसपछि पुस्तक व्यवसायमा आएँ । अहिले यसलाई सफल बनाउन एक किसिमको दुख त गर्नु प¥यो तर यहाँ हरेक मेहनतको पसिना आफ्नो पुँजी बन्छ । नेपाली युवा जसले वैदेशिक रोजगारीमा नजाँदा पनि हुन्छ उहाँहरुले नेपालमै कुनै व्यवसाय गर्नु भए हुन्छ । जो जानु भएको छ उहाँहरुले स्वदेश फर्किएपछि व्यवसायमा हात हाल्नु भए हामी आफु त स्वतन्त्र हुने थियौँ नै देश पनि सक्षम आर्थिक विकासको आधार सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बन्ने थियो ।”
प्रा.डा. गीताको ५२ बर्ष, डोटीदेखि इटहरीस...
नयाँ–नयाँ जीवन जिउन रङ्गमञ्चमा
“आफ्नो राष्ट्रिय भाषा बोल्न नपाउने नियम...
कहिलेकाहीँ टिभि स्क्रिनमा आफैँलाई हेरेर...